दक्षिण एसियामै पहिलो माटोको विद्युतीय नक्सांकन हुँदै, के हुन्छन किसानलाई फाइदा ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कृषि > दक्षिण एसियामै पहिलो माटोको विद्युतीय नक्सांकन हुँदै, के हुन्छन किसानलाई फाइदा ?
काठमाडौं । नेपाली किसानले अब आफ्नो खेतबारीको माटोको उर्बराशक्ति, अम्लीयपन प्रांगारिक पदार्थ माटोको बनोट जस्ता सजिलै जानकारी पाउन सक्ने भएका छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले सार्वजनिक गर्न लागेको माटोको विद्युतीय नक्सांकनमार्फत किसानले आफ्नो जग्गाको माटोमा कुन तत्व पुग्दैन, त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ ? कुन बालीको उत्पादन राम्रो हुन्छ ? कति मल प्रयोग गर्ने जस्ता जानकारी सहजै लिन सक्नेछन् ।
देशभरबाट २३ हजार दुइ सय ७३ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरी तयार गरिएको यो नक्सांकनले कृषकलाई सम्बन्धित साइटमा गएर आफ्नो जग्गाको माटोका रसायनिक पक्षबारे जानकारी पाउन सक्छन् । नक्सांकन कार्यले किसानमात्र नभई नीति निर्माता, अनुसन्धान कर्ता, कृषि प्राविधिक निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायक संघ संस्था, मल आयातकर्तालाई समेत माटो सम्बन्धी पूर्ण जानकारी दिनेछ ।
माटोमा के कस्ता सुधार गरी बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ? कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको मल आपूर्ति गर्ने, माटोको सुधारका लागि अम्लीयपन, प्रांगारिक पदार्थको मात्रा तथा सुक्ष्म खाद्यतत्वहरुको सन्तुलन कसरी गर्ने ? जस्ता निर्णय लिन सहज हुनेछ ।
२०७७ फागुुण २ गते १७:५७ मा प्रकाशित
सिटीजन लाइफको ७५ करोडको आईपीओ आउँदै, कहिले हुन्छ त निष्काशन ?
यातायात जगतमा एनएमबि बैंकको डिजीटल भुक्तानीमा फड्को
४० हजार अबैध बिदेशी कामदारले के गर्छन् नेपालमा ?
महानगरमा सार्वजनिक बिदा !
नारायणगढ-मुग्लिन र मुग्लिन-नौबीसे सडक एकतर्फी सञ्चालन